बला’त्कारको आरोप लगाएकी महिलाले प्रहरीलाई दिइनन् उजुरी, प्रहरीले के गर्छ अब ? - Nepal Insider
Home/समाचार/बला’त्कारको आरोप लगाएकी महिलाले प्रहरीलाई दिइनन् उजुरी, प्रहरीले के गर्छ अब ?
आफुमाथी ब ला त्कार भएको भन्दै मिडियामा आएकी रोशनी शाहीको बिषयमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । महिलाले प्रहरी उजुरी नदिएपनि महरा आफैंले आफुमाथी लागेको आरोपको अनुसन्धान थाल्न आग्रह गरेपछि प्रहरीले आन्तरिक छानबिन थालेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले टिभी अन्नपूर्णसँग भने आरोप गम्भीर विषय भएकाले आन्तरिक रुपमा यसको अनुसन्धान शुरु गरेका हौं ।
सामन्यतय पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा अनुुसन्धान गर्ने कानुनी व्यवस्था हुदाँहुदैं महिला प्रहरीको सम्पर्कमा नआएपनि उनको भिडियोसहित मिडियामा समाचार आईसकेकाले हामीले आन्तरिक रुपमा यसको अनुसन्धान शुरु गरेका हौं उनले भने । आरोपित सभामुख महराले समेत प्रहरी नेतृत्वलाई आफैंले फोन गरेर यसको अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको समेत उनले सुनाए । अनुसन्धान टोलीले अहिले पीडित भनिएकी महिला र सभामुख महराको फोन ट्रयाक गर्ने काम भईरहेको छ ।
संघीय संसदको सचिवालयमा काम गर्ने एक महिलाले सभामुख महराले आफुलाई आफ्नै कोठामा बला त्का र गरेको आरोप लगाएकी छन । तर महराले भने आफुमाथी लगाइएको आरोप तथ्यहिन तर ग म्भिर भएको बताएका छन् । नीज महिलासँग आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध भएकाले नियमित आउने जाने हुने गरेको र सोही रात पनि उनकोमा पुगेर सँगै र क्सी खाएको स्विकार गरेका छन । तर अरु कुनै काम नगरेको उनको जिकिर छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आरोप लागेका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएका छन् । अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेताहरूको छलफलपश्चात् देश र जनताको हितका लागि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
आरोप लगाएको सन्दर्भमा छलफल गर्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयको आकस्मिक बैठक डाकिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा महराबारे निर्णय गर्न नेकपाका अध्यक्षद्वय लगायत शिर्ष नेताबीच छलफल भइरहेकाे छ । यससँगै सभामुख महराले आज अपरान्ह राजीनामा दिने तयारी गरिरहेको विशेष स्रोतबाट बुझिन आएको छ ।
नेकपाका नेताका अनुसार हिजो नै समाचार बाहिरीएपछि “पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले हिँजोदेखि नै महराजीलाई यसको संकेत गरिसकेका छन्।”महराले बिज्ञप्ति मार्फत यस आरोपको खण्डन गरेपनि उनि निकै अताल्लिएका छन् त्यसैले पनि आज साँझ सम्म महराले राष्ट्रपति समक्ष राजिनामा दिने सम्भावना पनि रहेको छ । आफूमाथि लागेको आरोपबारे निकटष्थसँग परामर्श गरिरहका महरालाई सत्तारुढ दल नेकपाले नै राजीनामा दिन सुझाव दिएको छ।
काठमाडौंको व्यस्त क्षेत्रमा भिषण आगलागी ठुलो क्षतिको आशंका
प्यूठानमा नेकपाका बागी उम्मेदवार विजयी
श्रृंखला खतिवडाकी आमा नेकपा जिल्ला अध्यक्ष, बाबु इन्चार्ज
१९ वर्षे किशोरी, ३ हजार ७ सय फिटमा उडेको जहाजबाट जब हाम फालिन्..